Soomaaliland: Ammaanka oo siweyn loo adkeeyey iyo natiijada oo la sugayo | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Soomaaliland: Ammaanka oo siweyn loo adkeeyey iyo natiijada oo la sugayo
Soomaaliland: Ammaanka oo siweyn loo adkeeyey iyo natiijada oo la sugayo
Soomaaliland(SONNA) Wararka ka imaanaya Soomaaliland ayaa sheegaya in xaaldda xaafadaha ay xalay rabshado ka dheceen xalay ee ka tirsan Hargeysa iyo Burco, ay tahay mid degana,iyadoo gudiga doorashooyinkan uu booqyo isdaba jog ah uu u jeedinayo dadka deegaanka.
Rabshado gacan ka hadal ah ayaa sababay dhimashada inta la ogyahay labo qof oo shacab ah kadib markii taageerayaasha Xisbiga Mucaaradka ee Wadani ay sameeyeen isku so baxyo.
Maxamed Diiriye Xayd oo ah Gudoomiye ku xigeenka Gobolka Togdheer ee Soomaalilabd warbaahinta u sheegay in ay daggan tahay xaaladda xaafadihii ay rabshadaha ka dhaceen xalay ee Burco.
Balse guddiga doorashooyiinka Soomaaliland ayaa codsaday in ciddii cabasho qabta ay u gudbiyaan guddiga, sidoo kale wuxuu ku baaqay in aan laga hordhicin natiijada,isagoo gudigu intaasi ku daray in aanay jirin wax isdaba marin xaga doorashada ah.
Cabduqadir Imaan Warsame oo ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay la hadlaan oo ay qanciyaan cidkasta oo waxtabanaysa.
Ciidamo aad u farabadan oo ammaanka suga ayaa la geeyey goobihii rabshaduhu ay ka dheceen,si ay uga hortagaan falall kale oo halkasi ka dhaca.
Shacabka Soomaaliland ayaa dhagaha u taagaya natiijada ka soo baxda doorashada madaxtinimo ee Soomaaliland,iyadoo ay jiraan kormeerayaal caalami ah oo iyana la socda habsami u socodka doorashadaasi.
Previous articleHay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda oo heshay doon dheereysa oo lagu ilaalinayo socdaalka Xuduudaha badda
Next articleMadaxweynaha Putland oo kormeeray garoonka diyaaradaha Garoowe oo howlo dib u habeyn ay ku socoto(SAWIRRO)